Raw MT2 (Melanotan-II) Powder (121062-08-6) Mpanamboatra
Ny vovo-dronono MT2 (Melanotan-II) dia heptapeptide siklikika syntetika, analog of alpha-melanotropin (4,10); afaka ………
Ity peptide MT-2 ity dia natao hanentanana ny valin'ny vatana amin'ny famoahana ny taratra ataonao, satria ny famokarana melanina dia avo lenta ny masoandro farafahakeliny ilaina amin'ny fahazoana vokatra mangahazo faran'izay betsaka. Ity no vahaolana mety indrindra ho an'ireo izay manana hoditra tsara mba ho lasa tanna nefa tsy mila mandany herinandro amin'ny masoandro ary mandalo ny doro sy fanasitranana.
Ireo mpampiasa MT2 dia miaina fanamainana haingana kokoa sy fanasitranana haingana kokoa ny sela hoditra simba. Noho io antony io, ny melanotan II dia mifanaraka indrindra amin'ireo izay fotsy hoditra (hoditra karazana 1 & 2) ary mora mirehitra amin'ny masoandro.